5 lakilen'ny fitorahana bilaogy B2B | Martech Zone
Amin'ity herinandro ity aho dia miasa amin'ny famelabelarana ho an'ny kaonferansa Webtrends Engage. Tena voafaritra tsara ny lohahevitro ary fohy ny fotoana (10 minitra), ka sarotra amiko ny hanao fampisehoana iray heck! Nangatahana aho hiresaka amin'ny bilaogy B2B nahomby.
Nohamafisiko ny lakilen'ny Blogging Business to Business hatramin'ny paikady 5 miavaka ho an'ny fampisehoana:
Mialoha eo. Tsy ampy ny mitoraka bilaogy, ianao tsy maintsy eo alohan'ireo mpifaninana rehetra ary tabataba hafa any. Tokony ho manoloana ny mpanjifa, manoloana ireo tambajotra sosialy mifandraika amin'izany, manoloana ny valin'ny motera mpifaninana. Tsy afaka miandry tsotra izao ny olona hahita anao ianao.
Omeo lalana. Ny pejy rehetra ao amin'ny bilaoginao dia pejy fitodiana mahomby. Tsy maintsy manome fomba hifandraisan'ny mpitsidika anao ianao, tsy maintsy manome ny antony hifandraisany aminao ary tokony hataonao tsotra sy mora.
Fahano ny fahatsapana. Tsy mamaky lahatsoratra bilaogy ny olona fa manadihady izany. Ny sasany tsy mamaky mihintsy, mitady mpampita sary sy sary. Raha tsy mampiasa ianao toerana fotsy mahomby, manao feo sy horonan-tsary, ianao tsy mifandray amin'ny isan-jaton'ny maro ho an'ny mpihaino anao.
Fampahalalana momba ny fisamborana. Ny bilaogy dia fomba iray mahafinaritra hanomezana vaovao sy hananganana fahefana miaraka amin'ireo vinavina sy mpanjifa. Tsy mila manao izany maimaim-poana ianao… tsy maninona ny manadihady sy mangataka vaovao momba ny mpamakinao. Manome loharano fanampiny toy ny whitepapers na webinar mitaky fisoratana anarana.
Refesina amin'ny dolara. Engagement tsy refesina amin'ny fanehoan-kevitra, izany refesina dolara sy cents. Ilaina ny fampidirana orinasa Analytics fitaovana afaka mahazaka fandrefesana marina ny ezaka fitorahana bilaogy.
Ny lakile tsirairay avy, mazava ho azy, dia mety misy famelabelaran-kevitra mifandraika amin'izany… fa aza hadino ny sary be raha mibilaogy amin'ny orinasa miaraka amina orinasa hafa ianao.
Tags: b2bbilaogy b2batiny b2bfahombiazanaFacebookwebtrends
Mitoraka bilaogy amin'ny tongotra? Fiantrana sy marketing
3 Jan 2010 amin'ny 3:46 PM
Soso-kevitra lehibe. Nandritra ny taona maro no nibilaogy aho, saingy tena nahita fiovana tamin'ny orinasako tao anatin'ny enim-bolana lasa satria nifantoka kokoa ny bilaogy, ary nifandray tamin'ny sisa tamin'ny tranokalako.